Strawberry na Greek yogọt smoothie. Ihe ọ drinkụ drinkụ na-atọ ụtọ | Ntụziaka
Ascen Jimenez | 10/04/2021 18:00 | Emelitere ka 12/04/2021 13:31 | Ihe ọ forụụ maka ụmụaka, Menmụaka menus, Ihe ọerụ Dụ maka ụmụaka
The mụrụmụrụ bụ thicker karịa smoothie na mgbe nile nwere mkpụrụ osisi. Gịnị ka mma iberibe karịa mmiri strawberries inye ekpomeekpo, na agba na nri a ike ọ drinkụ enụ enriched na yogọt. Anyị ga-agbakwunye ụfọdụ mkpụrụ osisi nke oke ọhịa nke mere na o nwere ọbụna ọtụtụ ihe ndị ọzọ yana ụcha dị ike karị.
Rasberi na chocolate smoothie ma ọ bụ ị na-etinye strawberries na ya?
Ọ bụrụ na ijere ya ozi na nnukwu iko ị ga-enweta ugboro abụọ. Ma enwerekwa nhọrọ nke igosipụta strawberry a smoothie na obere iko ma na-eje ozi dị ka eji megharịa ọnụ ma ọ bụ dị ka nri dị mfe. N'okwu abụọ echefula chọọ iko ahụ mma ya na nkpuru osisi ohuru, dika odi na foto a.
Anyị ga-eji yogurts nke Greek nke mere na udidi zuru oke. Nke anyi nwere sugary. Na n'ụlọ ị nwere yogurts Greek na-enweghị shuga? Ọ dị mma, tinye ngaji atọ nke ọcha shuga ma ọ bụ obere ihe na-atọ ụtọ. Gị mụrụmụrụ ga-atọ ụtọ.
A ụtọ arụrụ n'ụlọ smoothie, kwajuru na flavor na ahụkebe udidi.
Ntụziaka ụdị: Mmanya
Nri oge: 1 m
Oge niile: 6 m
2 Greek yogurts dị ụtọ (340 g)
4 tablespoons nke mmiri ara (ihe dị ka 25 ml)
Berriesfọdụ mkpụrụ osisi: 8 raspberries na 8 blueberries
More tomato na thinly sliced ​​strawberry maka garnish (nhọrọ)
Anyị na-asa strawberries na azuokokoosisi ha tupu iwepu ya.
Anyị na-ehichapụ ha ma wepu azuokokoosisi ahụ.
Anyị na-asacha ma na-agbapụ mkpụrụ osisi nke oke ọhịa.
Anyị na-etinye strawberries na blender. Ejirila m Thermomix, mana enwere ike ịme ya na ngwakọta ọ bụla.
Anyị na-agbakwunye yogurts Greek na mmiri ara ehi oyi.
Ọzọkwa mkpụrụ osisi uhie.
Anyị na-eti smoothie ahụ ruo mgbe ọ ga-adị mma na ya. Anyị na-eje ozi ozugbo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Recetin » Ntụziaka » Ihe ọ forụụ maka ụmụaka » Strawberry Greek Yogurt Smoothie
chai m hụrụ usoro nri a n'anya na m chọrọ ime ya ugbu a
Zaghachi angela jimenez